Iindaba - Zeziphi iindlela zokuthintela ukukhululeka kweebholithi ngexesha lokuchwetheza?
Njengesivali, iibholiti zisetyenziswa kakhulu kwizixhobo zamandla, oomatshini abasebenza ngoomatshini nangombane nakwamanye amashishini. I-bolt yenziwe ngamacandelo amabini: intloko kunye ne-screw. Kufuneka isebenzisane nenutin ukuqinisa amalungu amabini ngemingxunya. Iibholiti azinakususwa, kodwa ziya kukhululeka ukuba zihlala zidityaniswa kwiimfuno ezizodwa. Uqinisekisa njani ukuba i-bolt ayikhululeki? Eli nqaku liza kwazisa ngokukodwa indlela yokukhulula i-bolt.
Iindlela eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuthintela ukukhululeka kweebholithi kubandakanya ukutshixa ukukhuhlana, ukutshixa ngomatshini, kunye nokutshixa okusisigxina. Iindlela ezimbini zokuqala zizitshixo ezinokutsalwa. Ukutshixa okusisigxina akunakususwa kwaye kunxamnye nokukhululeka. Ukutshixa okufumanekayo kwenziwa ngee-gaskets, ii-nati zokuzibamba kunye namantongomane aphindwe kabini. Le ndlela ingasetyenziswa emva kokuqhaqha. Iindlela zokutshixa ngokusisigxina ezisetyenziswayo ziindawo zokudibanisa amabala, i-riveting kunye ne-bonding njalo njalo, le ndlela iya kutshabalalisa i-fasteners xa idityanisiwe kwaye ayinakusetyenziswa kwakhona.
1.Sherry washer thintela looseness: Emva kokuba ukuhlamba kwentwasahlobo kuhlanganisiwe, iiwashers ziyacaba. Igcina amandla okucinezela kunye nokuxabana phakathi kwemisonto ukunqanda ukungahambelani ngamandla.
2.Anti-ukukhulula nut phezulu: Ukusetyenziswa inyathelo top nut kubangela uhlobo evulwa ukuba phantsi uxinzelelo olongezelelweyo kunye ukukhuhlana ezongezelelweyo. Amandongomane ongezelelweyo enza ukuba umsebenzi ungathembeki kwaye ke kunqabile ukuba usetyenziswe kwi umatshini.
3.Self-uvala nut anti-evakalala: omnye isiphelo nut eyenziwe non-setyhula zivaliwe. Xa i-nut iqinisiwe, ukuvulwa kuyandiswa kwaye amandla okuvala okuvala asetyenziselwa ukucofa umsonto ngokuqinileyo. Le ndlela ilula kulwakhiwo kwaye ihlala isetyenziselwa ukukhulula i-bolt.
1.Stopping iqhoshana: Emva qinisa nut, ukulungisa monaural okanye yokuma iqhoshana iqhina emacaleni nut kunye nenxalenye edityanisiweyo ukuthintela ziba. Izixhobo zokutshixa kabini zingasetyenziselwa ukufezekisa ukutshixa kabini kwezi bolts.
Ucingo 2.Series intsimbi anti-evakalala: Sebenzisa ephantsi carbon intsimbi wire ukungena imingxunya entloko Screw nganye, kwaye uqhagamshele ngezikhonkwane kuthotho ukuvumela ukuba waqhekeza omnye komnye. Olu lwakhiwo lufuna uqwalaselo kwicala apho ucingo lusontwe khona.
1.Anti-evulekileyo yindlela yokubetha: Emva kokuba i-nut iqinisiwe, umsonto uqhekeza umsonto ekupheleni komsonto.
Uthintelo 2.Adhesion: Ukuncamathela anaerobic lisetyenziswa kumphezulu screwing komhlaba. Emva kokuba i-nut iqinisiwe, i-adhesive inganyangeka yodwa kwaye inefuthe elifanelekileyo lokulwa nokukhulula.
Ezi ndlela zilapha ngasentla zihlala zisetyenziswa kwimveliso nakwinkqubo yokuthintela ukukhululwa kweebholithi. Ekuqhubekeni kwemihla ngemihla, kufuneka ukhethe indlela efanelekileyo yokuthintela ukungahambelani ngokweemeko ezikhoyo.
Wuxi Lead Precision Oomatshini Co., Ltd. inikeza abathengi bonke ubungakanani epheleleyo iinkonzo zokubumba zesinyithi iinkqubo ezizodwa.